Ngathi-Yiwu Sandro Trade Co., Ltd.
Wamkelekile kutyelelo Yiwu Sandro Trade Co., Ltd.
Siyinkampani yokurhweba ebalaseleyo
Ibekwe kwi-Yiwu, Zhejiang, China, ingcali ekuboneleleni ngeempahla ezahlukeneyo zentsholongwane:
1 / ukulahla iimaski zokukhusela nezonyango 2 / KN95 iklasi yokugoba iMaski (ine-FFP1 / FFP2 / FFP3 iintlobo)
I-3 / iMask yokuhlinzwa, iMaski yaBantwana 4 / 3M KN90 / KN95 iimaski
Inqanaba 1 / inqanaba 2 / inqanaba 3 / inqanaba 4, zombini ukusetyenziswa koluntu kunye nonyango.
1 / Ithemometha yendlebe 2 / ithemometha yebunzi 3 / cap kunye umnqwazi kunye nekhaka
1 / imaski yelaphu 2 / iibhanana.
Inkampani yethu ineefektri ezingaphezu kwe-100 zokusebenzisana ezibhaliswe phantsi kwemithetho yeRiphabhlikhi yabantu base China, bafumana isatifikethi sobhaliso sesixhobo sonyango kunye nelayisensi yokuvelisa, eqinisekisiweyo nge-ISO9001: 2008 iNkqubo yoLawulo loMgangatho weHlabathi. Zonke zigqibile isiqinisekiso sempahla:
I-1 / iYurophu EN149: 2001 + A1: 2009 nge-FFP1 NR / FFP2 NR / FFP3 NR amabakala 2 / American NlOSH N95, FDA,
3 / Australia AS / NZS1716: 2003 4 / i-Chinese GB / YY.
Ingxelo yovavanyo lwe-5 / CE kunye ne-FDA AD GB yokuthumela ngaphandle kwilizwe liphela.
Amandla okuqala okuzimela e-R & D
Ukunikezelwa okukhuselekileyo nokwaneleyo kwezinto eziluhlaza
Iqela lokuthengisa elinobukrelekrele elinolwazi lobuchule kunye nesimo sengqondo esinyanisekileyo
Inkxaso egqwesileyo yasemva kwenkonzo esekwe kumgaqo wokuqala woMthengi
Inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nemigangatho yokuhlola ephezulu
Unikezelo olukhuselekileyo nolwaneleyo lokuluhlaza izixhobo
Ukusukela kwimiceli mngeni ngokukhawuleza, simanya abantu abanobuganga bokujongana nomceli mngeni. kwaye ngokuqhubekayo sandise amandla ethu okubonelela. Ngoku sinokufikelela kwisigidi esinye + sokulahla imaski kunye ne-100 lamawaka + kwiimaski ze-KN95 ngosuku.
Njengoko kukho inani elikhulu leemaski ezithunyelwa ngaphandle yonke imihla, siphucula inkonzo yamalungiselelo, ngoku sisebenzisene neenkampani ezininzi ezikhulu. Kukho iinqwelomoya ezi-2-3 rhoqo ngeveki kwaye zibhabhela kwizikhululo zeenqwelo moya kumazwe ahlukeneyo, ukuqinisekisa ukuba iimveliso zifika ngokukhuselekileyo nangokukhawuleza.
Amaqela obuchwephesha kunye nomenzi, umgangatho ophezulu kunye nokuthumela ngaphandle, konke kuqinisekisa ukuba sinikezela ngenkonzo efanelekileyo kuwe.
1 / Oomatshini abasebenza ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo.
2 / Amava atyebileyo kunye noxwebhu olugqityiweyo lokuhambisa ngenqanawa
Isiqinisekiso esigqityiweyo sokuthumela kumazwe angaphandle ubhubhane wokuthintela ubhubhane
Yamkelwe kwilizwe jikelele
Ukuhlangabezana neemfuno zikarhulumente. Zonke iimpahla zentsholongwane zinokuvunywa okuvela kumazwe ehlabathi, kubandakanya i-US, i-Yurophu, i-China, i-Australia, i-New Zealand, njl.
1 / Umgangatho ophezulu
2 / amaxabiso okhuphiswano
Ukuhanjiswa kwe-3 / ngokukhawuleza
4 / Inkonzo eyanelisayo Emva kokuthengisa
Inkonzo yokumisa kunye neQela leengcali
1 / Abasebenzi abaqeqeshiweyo. Kwinkqubo yokulandela inkqubo yokuvelisa, ukuhlolwa kwemveliso kunye nokuvavanywa, ukulungiswa kwempahla, kunye nenkonzo yabathengi, siyingcali kwaye sisebenzisana kakhulu
2/24/7 inkonzo, sibeka iimfuno zabathengi kunye neemfuno kwindawo yokuqala
INkonzo yabaThengi engenakuthelekiswa nanto
1 / Ukunikezela elona nqanaba liphezulu lenkonzo kunye nenkxaso kubathengi bethu abaxabisekileyo kwihlabathi liphela.
2 / Ukubonelela ngeempendulo ezikhawulezileyo nezingcali kwimibuzo okanye izimvo zakho.
3 / Ukuphendula ngaphakathi kwexesha lokutshintsha ngokukhawuleza. Yonke imibuzo yobuchwephesha iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24.
Ukuqhagamshelana nathi, nceda usithumelele i-imeyile kwi: umphathi@sandrotrade.com
Yiwu sandro urhwebo Co., ltd. Ukuthengisa
Ubuso beMask, Imaski yobuso beKn95, Imaski yelaphu, Imaski, Isigqumathelo somqhaphu, Imaski yoqhaqho,